: १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०७:१९ कुनै पनि अंगमा क्यान्सर हुन सक्छ - hamrohealth
: १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०७:१९ कुनै पनि अंगमा क्यान्सर हुन सक्छ
डा. सुदीप श्रेष्ठ, क्यान्सर विशेषज्ञ, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, हरिसिद्धि ललितपुर
नेपाली समाजमा क्यान्सर भन्नेबित्तिकै डराउने मनोविज्ञान छ । क्यान्सर सम्बन्धी सामाजिक भ्रमले आम मानिसबीच यो प्राणघातक रोगको रूपमा परिचित छ । तर लामो समयदेखि क्यान्सर रोगको उपचार र अध्ययनमा संंलग्न डा. सुदीप श्रेष्ठ क्यान्सरलाई पनि अन्य दीर्घ रोगजस्तै लिनुपर्ने बताउँछन् । ललितपुर हरिसिद्धिमा रहेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालका संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ एवं मेडिकल अन्कोलोजिस्ट डा. श्रेष्ठले नेपाल र भारतको विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका छन् । प्रस्तुत छ– क्यान्सर रोग, यसका कारण, लक्षण, उपचार र समसामयिक प्ररिप्रेक्ष्यबारे उनीसँग गरेको कुराकानिको सार :
आम मानिसले बुझ्ने क्यान्सर र वास्तविक क्यान्सरमा के फरक छ ?
जनमानसमा क्यान्सर सम्बन्धी ठूलो भ्रम छ । क्यान्सरलाई उनीहरू मृत्युको अर्को नामको रूपमा लिन्छन् । तर वास्तविकता यस्तो होइन । यो पनि अन्य दीर्घ रोगजस्तै हो । समयमै औषधि उपचार गर्नेे हो भने क्यान्सर निको हुने सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । कसैको अन्तिम चरणमा क्यान्सर रहेको पत्ता लाग्यो भने पनि उसलाई उपचारबाट लामो समयसम्म सजिलो गराएर राख्न सकिन्छ ।
वैज्ञानिक रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो शरीर करोडौं सूक्ष्म कोषले बनेको हुन्छ । जब तीमध्ये केही कोष बिग्रिन्छन्, तिनले आफ्नो काम गर्न छाड्छन् र अप्राकृतिक तरीकाले बढ्न थाल्छन् । त्यसरी बढ्दै गएपछि सम्बन्धित अंगमा घाउ बन्छ, जसको उपचार गरिएन भने त्यसले राम्ररी काम गर्न सक्दैन र क्यान्सरका लक्षण देखिन थाल्छन् ।
नेपालमा बढी देखिएका क्यान्सर के के हुन् ?
नेपालमा क्यान्सर फोक्सोको क्यान्सर बढी मात्रामा हुने गरेको छ । यो संसारभर सबैभन्दा धेरै देखिने क्यान्सरमा पनि पर्छ । यसपछि महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर पनि नेपालमा धेरै छ । यससँगै स्तन क्यान्सर पनि महिलामा बढी देखिएको पाइन्छ । नाक, कान, घाँटी र ठूलो आन्द्राको क्यान्सर समेत दक्षिण एशियामा बढी नै देखिएको छ । यसबाहेक शरीरको कुनै पनि अंगमा क्यान्सर हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।
क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिने प्रविधि के कस्तो छ ?
पछिल्लो दशकमा यसको उपचारमा धेरै प्रविधि भित्रिसकेका छन् । क्यान्सरको उपचार एउटा डाक्टर वा विशेषज्ञले मात्र गर्ने होइन । यसको उपचारमा उनीहरूको एउटा टिम नै लाग्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले सबै क्यान्सरको उपचार एउटै छानामुनि बनाउने प्रयास गरेका छौं । थेरापीका लागि पनि नयाँ नयाँ प्रवधि छन् । क्यान्सरको उपचार विधिमा शल्यक्रिया, रेडियो थेरापी, केमोथेरापी, इम्युनोथेरापी, फिजियोथेरापी आदि प्रमुख विधि हुन् । वैज्ञानिक आविष्कारको तीव्रताले भोलिका दिनमा अझ प्रभावकारी प्रविधि आउने निश्चित छ ।
प्रदूषणले पनि क्यान्सर गराउँछ ?
आजभोलि क्यान्सर बढ्नुमा वातावरण प्रदूषण पनि प्रमुख कारक तत्त्व बनेको छ । इँटा–टायल कारखानाबाट निस्कने धूलो र गाडीको धूँवाले पनि स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ, जसले क्यान्सर गराउन सक्छ । सरकारले प्रदूषण घटाउने नियम त ल्याएको छ, तर यसलाई कडाइ नगरिएकाले प्रदूषण भयावह बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा मोटरसाइकल तथा साइकल चालक र पैदल यात्रु परेका छन् । त्यसैले प्रदूषणबाट फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ । छालाको क्यान्सर विषादीयुक्त रसायनको कारण हुन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि हामीले समुदाय स्तरमा जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएका छौं । प्रदूषण कम गर्न सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
क्यान्सर लाग्ने प्रमुख कारण के के हुन् ?
सामान्य अवस्थामा काम गरिरहेका कोषमा केही परिवर्तन आउँछ र ती बढ्न थाल्छन् । अनि क्यान्सर हुन्छ । ती कोषमा आउने त्यो डरलाग्दो परिवर्तनका कारण विभिन्न छन् । हामीलाई थाहा भएका कारणमध्ये मुख्य कारण चुरोट, खैनीजस्ता सूर्तीजन्य पदार्थ पनि हो । क्यान्सरका अन्य कारणमा जंकफुड, विषाक्त खानेकुरा, कीटनाशक छरेर उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको सेवन, वंशाणुगत कारण र प्रदूषण हुन् । केही क्यान्सरको वास्तविक कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।
क्यान्सरका लक्षण के के हुन् ?
क्यान्सरका लक्षण कुन अंगको क्यान्सर हो, त्यसै अनुसार फरक हुन्छन् । यस्ता खालका लक्षण १ महीनाभन्दा लामो समयसम्म भए डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ । मुख्यमुख्य लक्षणमा शरीर कमजोर हुने, तौल घट्ने, कुनै पनि अंगमा गिर्खा गाँठा आउने, छालामा नयाँ कोठी पलाउने वा भएका कोठी ठूलो हुँदै जाने हो । यसबाहेक मुखमा र जिब्रोमा लामो समयदेखि घाउ हुनु, खाना निल्दा दुख्नु तथा स्वर फेरिनु, श्वास फेर्न गाह्रो हुनु, खोकी लाग्नु वा खकारमा रगत देखा पर्नु, लामो समयदेखि ग्यास्टिक, पेट पोल्नु वा उल्टी हुनु, कारण पत्ता नलागेको ज्वरो आइरहनु र दिसामा रगत देखिनु पनि क्यान्सरकै लक्षण हुन् ।
तर यसको पूर्ण परीक्षण नगरी यही नै क्यान्सर हो भन्न सकिन्न ।
क्यान्सर लाग्नै नदिन के गर्ने त ?
मुख्य कुरा त आफ्नो आहार विहारमा ध्यान पुर्‍याउनु नै हो । यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ, जाँडरक्सी, पान, गुट्खा र सुपारी धेरै खाने गर्नु हुँदैन । खानपिन र बानी व्यवहारमा सुधार गर्ने तथा अविवाहित महिलाले ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको भ्याक्सिन लगाउने गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या भए पनि लामो समयसम्म रहिरहे डाक्टरसँग तुरुन्त जाँच गराउनुपर्छ । यस्तो बानीले क्यान्सरबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ ।
कतिपय नेपाली क्यान्सरको उपचारका लागि विदेश जाने गर्छन् । यहा“को उपचार स्तरीय नभएर हो वा किन ?
क्यान्सरको स्तरीय उपचार नेपालमै सम्भव छ । क्यान्सरको उपचारका नाममा ठूलो रकम विदेश गइरहेको छ, जब कि नेपालमै क्यान्सरको विशेषज्ञ उपचार सेवा उपलब्ध छ । नेपालमै उपचार गराएर निको भएका जति पनि जानुहुन्छ, उहाँहरू ‘मैले नेपालमै उपचार गरेर निको भएँ’ भन्नुहुन्न । त्यस कारण पनि क्यान्सरको स्तरीय उपचार यहीँ सम्भव छ भनेर धेरैले विश्वास नै गर्दैनन् । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान नै कमजोर भएकाले यसो भएको हो । विदेशमा मात्र राम्रो उपचार सुविधा हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर हुँदैन । मनोबल उच्च पारेर उपचार गराउन आए स्वदेशमा सस्तोमै उपचार हुन्छ । यसबाट आफू र परिवारलाई सहज पनि हुन्छ ।
Previous नेपालमै हुने उपचारका लागि विदेश जान रोक्ने प्रयासमा छौं : प्राडा मोहनराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]
नेपालमै हुने उपचारका लागि विदेश जान रोक्ने प्रयासमा छौं : प्राडा मोहनराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]
3 months ago Hamrohealth